Huawei FreeBuds 4, ny fanamboarana vokatra saika tonga lafatra [Review] | Vaovao Gadget
Huawei FreeBuds 4, ny fanamboarana vokatra saika tonga lafatra [Review]
Miguel Hernandez | 18/08/2021 12:00 | General, hevitra
Ao amin'ny Actualidad Gadget dia mitondra vokatra audio ho anao indray izahay, efa fantatrao fa tianay ny hitazona anao hatrany miaraka amin'ny vaovao amin'ny sehatra rehetra, ary Huawei dia iray amin'ireo mpanamboatra manolotra safidy hafa amin'ny elanelam-bidy samihafa. Taorian'ny fahombiazan'ny FreeBuds 3, nanadio ilay maodely i Huawei ary nahatonga azy io ho tonga lafatra.
Jereo miaraka aminay ny Huawei FreeBuds 4 vaovao, ny headphones TWS vaovao miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mahery vaika indrindra. Izahay dia mamakafaka ny endriny rehetra, ny fahaizany ary ny fahalemeny amin'ity fanadihadihana lalina ity, halahelo azy ve ianao? Azontsika antoka tanteraka fa tsia, mankanesa aminay amin'ity fanadihadiana vaovao ity.
Raha mijery ny famerenana am-polony ianao dia ho hitanao fa maro ny mpandalina no manaiky fa ireo Huawei ireo FreeBuds 4 Izy ireo no headphones vidin'ny kalitao tsara indrindra eny an-tsena rehefa miresaka momba an-telefaona misokatra indrindra izahay, fa tianay ny hanome ny hevitray manokana anao, ary noho izany dia tsy maintsy hizahanay azy ireo amin'ny lalina… Andao handeha!
Tianao ve izy ireo? Vidio izy ireo miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 20% amin'ny Amazon.
1 Ode amin'ny headphone famoronana misokatra
3 Ny kalitaon'ny feo sy ny fandraketana "hache-dé".
4 Fahaleovan-tena sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Ode amin'ny headphone famoronana misokatra
Ny headphone an-tsofina dia tsara dia tsara, tsara indrindra izany raha tsy arotsakao izany, indrindra raha manana iray amin'ireo sofina kely ireo ianao izay toa raisin'ireo injenieran'ny famolavolana ireo kaontenera-dry zareo TWS dia tsara indrindra amin'ny fanatanterahana fanafoanana ny tabataba mavitrika. Huawei dia nieritreritra ireo mpampiasa rehetra izay mankahala ny sofina an-tsofina na hoe mandona na mandratra antsika izy ireo, ary nanapa-kevitra ny hanatona anay amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika amin'ireto. Huawei FreeBuds 4, saika mitovy amin'ny Huawei FreeBuds 3 amin'ny famolavolana, ary dinihiko am-pahatsorana ho hany safidiko manokana. Na eo aza izany, ao amin'ny Podcast izay ataontsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Actualidad iPhone dia ho hitanao fa nampiasa ny Huawei FreeBuds 4i aho nandritra ny volana maro, fifandisoan-kevitra (tsy tokony nomeko ny Huawei FreeBuds 3).
Loko azo: Fotsy sy volafotsy
Tanana siliky: Maitso, volomboasary, manga ary mainty
Miaraka amin'ny famolavolana «misokatra» mampiavaka azy ireo, mipetraka ao an-tsofina ireo FreeBuds 3, tsy mianjera, tsy mitoka-monina, tsy manelingelina anao. Manana refy isaky ny sofina 41,4 x 16,8 x 18,5 mm amin'ny 4 grama fotsiny isika, raha ny casing charge, izay nivoatra tamin'ny habe somary kely kokoa noho ny teo aloha, dia mijanona 58 x 21,2 milimetatra mandritra ny 38 grama (rehefa foana).
Ny valiny dia fampiononana mbola tsy nisy toa azy tamin'ny headphones, ary ny famolavolana ao anaty boaty izay mahatonga azy ho sakaizan'ireo pataloha miverina napetaka indray izay itafiantsika ankehitriny, tsy manelingelina izany, mora ampiasaina amin'ny tanana iray ary ny kalitaon'ny fananganana, toy ny mahazatra ao amin'ny Huawei, no tena tsara.
Betsaka ny zavatra nolazaiko taminao, ary tsy nilaza na inona na inona taminao aho. Ho an'ireo mandroso kokoa amin'ny kilasy dia hanome andian-dahatsoratra mahaliana isika, andao hiresaka momba ny toetra ara-teknika. Manana Bluetooth 5.2 izahay, Huawei dia manolo-tena amin'ny kinova farany misy eny an-tsena mba hampihenana ny fahatapahana sy hanatsarana ny fifandraisana. Tahaka ireo fitaovan'ny FreeBuds sisa izay ampiarahanay amin'ny alàlan'ny fanokafana pop-up, izany hoe ny fampifanarahana mandeha ho azy amin'ireo fitaovana Huawei (EMUI 10 na avo kokoa), dia heverinay fa miaraka amina chip NFC voafetra.
Manana mpamily 14,3 millimeter isika ho an'ny singa tsirairay izay mampanantena feo misy famaritana avo lenta, ny earphone tsirairay avy dia samy manana ny maotera ananany hamoaka hovitrovitra bebe kokoa amin'ny diaphragm, izany dia lasa teny amin'ny bas izay hahagaga ny olona tia mozika ara-barotra, hiresaka bebe kokoa momba an'ity karazana feo ity isika avy eo. Ny elanelam-potoana matetika, misaotra ny mpanara-maso LCP dia hatramin'ny 40 kHz, ka manamafy ny timbres sy ny note ambony.
Ny kalitaon'ny feo sy ny fandraketana "hache-dé".
Tsy azo iadian-kevitra ny kalitaon'ny feo, ananantsika bass (bass) nohamafisina manokana Ary ireo izay tia mozika somary tsy dia ara-barotra dia ho afaka hameno amin'ny alàlan'ny fampiharana AI Life an'i Huawei, azo alaina ho an'ny Android sy ny iOS. Manana fanamarihana ambony sy afovoany izahay momba ny zavatra tsara indrindra nohaninay hatrizay, indrindra amin'ny headphone misokatra, izay mety ho simba amin'ny feo manodidina na ny fanodikodinana. Huawei dia nametaka ny loop niaraka tamin'ny kalitaon'ny feo an-telefaona raha heverinay fa "misokatra" izy ireo, zavatra izay tsy hankasitrahan'ny rehetra.
Satria tsy te handao ireo mpampiasa mandà ny sofina an-tsofina i Huawei dia nanapa-kevitra ny hiasa hatrany amin'ny akany izay marika maro hafa no efa nilaozana mivantana, ka manolotra anay ANC 2.0 izay mampanantena fanafoanana tabataba hatramin'ny 25db nefa tsy mila mampiditra fingotra manelingelina ao an-tsofintsika. Satria samy hafa ny sofina tsirairay, ny sensor sy microphones an'ny FreeBuds 4 dia handinika sy hanolotra andiana fanitsiana ahafahana manafoana ny tabataba mety indrindra.
Sarotra izany raha tsy tsy azo atao ny mahafantatra raha toa ka tanteraka daholo ireo fampanantenany ireo amin'ny fotoana iray, ny hany zavatra azontsika hitsarana dia ny fanafoanana ny tabataba, ary hamafisiko fa tsy matahotra aho sao diso izany ny fitaovana tsara indrindra amin'ny headset 'open', misy fahasamihafana be. Tsy dia hitako loatra ny fanelingelenana ny kalitaon'ny feo ary ny fanafoanana dia mihoatra ny ampy amin'ny fampiasana isan'andro.
Izy ireo koa dia manana 48 kHz fandraisam-peo HD misaotra ireo maodely fanamboarana roa:
Tontolo iainana: Haka ny feo manodidina anao amin'ny stereo
Feo: Miaraka amin'ny fanekena ny fahita matetika amin'ny feo dia hamaha ny fahasamihafana izy ary hamela ny tontolo iainana any aoriana
Sarotra ny manazava Manoro hevitra anao aho hijery ny horonantsary Androidsis izay anaovana fitsapana feo momba ny mikrô. Azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny vidiny tsara indrindra ary tsy misy sarany fandefasana, aza adino.
Fahaleovan-tena sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Manana fahaleovan-tena tanteraka isika mandritra ny 4 ora isaky ny headset miaraka amin'ny ANC tsy mandeha ary 2,5 ora miaraka amin'i ANC amin'ny. Amin'ny tranga fenoina feno dia ho tonga amin'ny 22 alina tsy misy ANC izahay ary amin'ny 14 ora hariva miaraka amin'ny napetraka ANC. Ny fitsapana nataonay dia saiky nanakaiky ny fizakantena natolotr'i Huawei, izay mampanantena playback 2,5 ora miaraka amin'ny 15 minitra fotsiny. Mazava ho azy fa manana fiampangana tsy misy tariby isika (raha mandoa vola mihoatra ny 20 euro ...).
Amin'izany fomba izany, ny Huawei FreeBuds 4 dia heverina ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra (raha ny fijeriko ny tsara indrindra) amin'ny fakan-tsarimihetsika TWS misokatra noho ny kalitao, ny famokarana ary ny mifanentana. Amidy any Amazon izy ireo, azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny 119 euro (Vidiny mahazatra 149 euro), ary koa ny tranonkala ofisialin'i Huawei.
Navoaka tamin'ny: 18 Aogositra 2021
Fanovana farany: 8 Septambra amin'ny 2021
Fitaovana, famolavolana, fampiononana ary fanamboarana
Mora simba ilay boaty
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Huawei FreeBuds 4, ny fanamboarana vokatra saika tonga lafatra [Review]
ILIFE H70, ilay mpanadio tsy misy tariby tadiavinao
SPC Smartee Boost, famantaranandro amin'ny vidiny mirary